Wepamusoro gumi makuru akanyanya muWWE nhoroondo - Wwe
Wepamusoro gumi makuru akanyanya muWWE nhoroondo
Munhoroondo yese yakamisikidzwa yewrestling wrestling, pakave nenguva dzakasarudzika isu, sevateveri vatisingazombokanganwa.
Kunyangwe iri imwe zita remutambo, kana pamwe kudzoka kunoshamisa. Chero zvingave zviripo, pane zvimwe zviratidzo zve nostalgic zvekuti iwe neni tichagara tichikwanisa kutarisa kumashure, kuti titore zvimwe zvezviyeuchidzo zvikuru izvo zvanyatsoita isu vateveri vatiri nhasi.
Chinhu chakakosha pakurwiswa nhoroondo ndidzo dzisingaverengeke makotesheni. Kunyangwe chiri chinhu iwe chawakanzwa mune epic promo, kana pamwe chimwe chinhu chakaziviswa nemuziviriri panzvimbo yematombo. Zvisinei, pane mamwe makotesheni ausingazombokanganwa.
Icho chikamu chekuzivikanwa kweiyi indasitiri uye machira ezvinoita kuti ive huru kwazvo. Muchikamu chino, tinotarisa kumashure kune mamwe makotesheni makuru akaitwa muWWE nhoroondo. Muchokwadi, takavadzikisa pasi kusvika kumusoro gumi WWE makotesheni enguva dzese. Tora rwendo nesu uye uone kuti mangani eaya makotesheni aunogona kuyeuka.
# 10 'Kana usiri pasi neizvozvo ....'
DX yaigara yakagadzirira nguva yakanaka!
Triple H uye Shawn Michaels anogara achitariswa semakona emakona eDegeneration-X. Vakatanga sekukanganisa kwekambani mbiri, vachingoita zvavanoda kuita, pese pavaida kuzviita. Vaizopedzisira vaine nhengo nyowani dzinouya dzichienda mudanga reDX.
Verenga zvakare: Wepamusoro gumi mukurusa WWE catchphrases enguva dzese
Asi, iyo isina hanya ideology yaizoramba yakafanana. X-Pac, Chyna, Rick Rude, Billy Gunn uye Iyo Road Dogg vese vangave vari chikamu chegirinhi uye vatema timu, naGunn naRoad Dogg vari vaviri venguva dzose dzedanga.
Neantics yavo yemusango uye isina hanya, chimwe chezvinhu zvisingakanganwiki zveDX kwaive kupinda kwavo, ndipo patakawana nhamba yegumi nhatu yakanyanya.
'Kana usiri pasi nezvo, isu tine mazwi maviri ekuti ....... KUNZEI!'
ndoziva sei kuti ari mandiri
yakareba sei rhea ripley
ndinodzidza sei kuvimba
maitiro ekuudza kana mukomana waunoshanda naye achikuda
maitiro ekuwana yako yakasarudzika tarenda
legacies mwaka 3 kuburitswa zuva